Jowhar.com : Somali Leader News - News: Dood cilmiyeed ay ka qeyb galeen odayaal iyo waxgarad oo maanta ka dhacay Muqdisho (sawirro)
April 25 2014 03:26:51
Dood cilmiyeed ay ka qeyb galeen odayaal iyo waxgarad oo maanta ka dhacay Muqdisho (sawirro)
Dood cilmiyeed ay ka qeyb galeen odayaal iyo waxgarad ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasoo ay soo qaban qaabisay Hey'adda Wada hadalka Bulshada ee CCD, iyadoo looga hadlayay sidii dhalinyarada loo bad baadin lahaa.
Dooda oo aheyd mid lagu falanqeynayay dhibaatooyinka dhalinyarada soo wajahay iyo unug-lahaanshaha fikradaha qaldan ee lagu marin habaabiyo, loona adeegsado dagaalada, dilka iyo weerarada ismiidaaminta.
Ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay C/llaahi Cabdulle Wehliye oo ka mid ahaa xubnihii ka qeyb galay dood cilmiyeedka, waxaana uu xusay in marka hore ay haboon tahay in dhalinyarada la marin habaabiyay la wacyi gelinayo, loona sheego waxa saxan.
"Dhalinyarada la qalday waxaa marka hore wanaagsan in la wacyi gelinayo, wadada saxsan lagu soo hogaamiyo, jidka qaldan laga soo leexiyo, kadibna loo sameeyo baraarujin iyo xarumo lagu dhaqan celiyo"ayuu yiri C/llaahi Cabdulle Wehliye.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo culimada ay sameeyaan barnaamijyo lagu wacyi gelinayo dhalinyarada, si loo bad baadiyo jiilka soo koraya, mustaqbal wanaagsan loogu horseedo.
Nabadoon Maxamuud Cali Maxamed oo ka mid ahaa odayaashi dhaqanka ka hadlay dood cilmiyeedka ayaa sheegay in dhalinyarada loo baahan yahay in aan dagaal loogu baaqin, isagoo soo qaatay hadalkii ka soo yeeray hogaamiyaha alshabaab.
"Hadalka uu yiri axmed godane ma ahan hadal ku cusub umada, muddo badan ayuu dagaal ku baaqayay oo dhalinyarada xabad isugu dhiibayay, hadalkaas ma ahan mid cilmi iyo caqli ku fadhiyo, waxaa leenahay ina Godane bulshadada ku soo laabo, nabadgelyada ka shaqeyn, mana ahan hadal ay umada qaadaneyso ama dhaliyarada qaadaneyso"ayuu yiri Nabadoonka.
Sidoo kale waxaa isna hadlay C/llaahi Faarax Xeyle oo sheegay in loo baahan yahay in odayaasha ay door weyn ka qaateen nabadeynta, si umada kala irdhoowday la isku soo celiyo, lana heshiisiiyo, si nabad waarta loo gaaro.
Abwaan Shido ayaa isna ugu baaqay dhalinyarada u dagaalanta Al-Shabaab inay isaga soo baxaan oo dadkooda dhinac ka raacaan, waxaana uu u jeediyay inay ka faa'ideystaan cafiska dowladda u fidiso, mustaqbalkooda aanay lumin.
Ugu dambeyn Maxamuud Jaamac Cigaal ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ay qeyb weyn ka qaadan karaan wacyi gelinta dhalinyarada oo noqday kuwa wax lagu duminayo, mar walbana horseed ka yihiin colaada, waxaana uu tilmaamay in hadii odayaasha ay shirar joogto ah u qabtaan dhalinyarada wax badan lagu guuleysan karo in la wacyi geliyo.
mahad on March 13 2014
Jowhar.com754,009 unique visits